PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - Igwetyiwe ingcibi yomgunyathi
Igwetyiwe ingcibi yomgunyathi
Isolezwe lesiXhosa - 2019-01-10 - IINDABA - ABONGILE GINYA
ABAZALI bomfana oneshumi elinesixhenxe ubudala owoluswa eneshumi elinesihlanu leminyaka, esoluswa ngaphandle kwemvume yabo yingcibi yomgunyathi, bathi noko isigwebo esinikwe le ngcibi yomgunyathi yaseZigodweni eNeeds Camp eMonti siyabaxolisa kuba sakudlulisa umyalezo nakwabanye.
ULelethu Zilibele (34), ingcibi yomgunyathi, ungutata kubantwana ababini oneminyaka esibhozo kwakunye nesixhenxe kwaye usebenza nje ngonogada eMonti.
UAyanda Bayiya kwakunye nonkosikazi wakhe bebethetha neentatheli phambi kwenkundla yamatyala eMonti izolo ngethuba uZilibele enikwa isigwebo yinkundla malunga netyala ebejongene nalo lokolusa abantwana ngokungekho semthethweni.
UZilibele ugetywe iminyaka emihlanu yaxhonywa kangangeminyaka emithathu waphinda wadliwa imali engamawaka asibhozo eerandi (R8000) ukuba akakwazi ukuyihlawula adontse iminyaka emibini ejele.
UBayiya uthi oku kwenziwa nguZilibele kunyana wabo kwiminyaka emibini edlulileyo zange bakuthande kwabahlupha umphefumlo.
“Thina bazali bakhe sasinezicwangciso zethu zokuba unyana wethu sakumolusa nini njani kwaye phi. Zange sithande xa sele sisiva ukuba wolukile kungoko sagqiba ukuba masishukume sivule ityala kuba kwakutsho kusinde nabanye kwaye ibesisifundo nakwezinye iingcibi zomgunyathi. Mawahlonitshwe amasiko wabanye abantu. Lisiko lethu eli liye ladelelwa,” utshilo uBayiya.
Ngethuba uZilibele eme phambi kwenkundla eziphendulela udize ukuba ixhoba lamcenga ukuba amoluse ngenkani yena engafuni.
UMphathiswa woBambiswano kuRhulumento kwakunye neMicimbi yeeNkosi ephondweni uFikile Xasa ezimase le nkundla udize ukuba uxolile naye sesi sigwebo.
Uthi kudala behlutshwa ziingcibi zomgunyathi, zisinde kodwa oku kuyakuthi kube sisifundo.
Isithethi seGunya Bantu lezoTshutshiso ephondweni uTsepo Ndwalaza uthi esi sisigwebo esifanelekileyo kwaye bonele siso. “Hayi onke amatyala anje aye avezwe esidlangalaleni.”
UZilibele uthetheleleke kwinkundla kuba ixhoba laphuma liphila esuthwini nangona isithi akwenzileyo akukho semthethweni kuba woluse umntwana ongaphantsi kweminyaka.
Umgaqo uthi umntwana makaye nomzali kwingcibi kwaye aqale ekliniki. Umntwana makangoluswa ngaphandle kwemvume yomzali. Ixhoba sele lineminyaka elishumi elinesixhenxe.
Izolo beliqala esikolweni nje gabanye nalapho lenza uGrade 9 ngokokutsho kukaBayiya.
Abakhwetha abathe babhubha bebonke kwixesha lolwaluko kweyoMnga babengamashumi amabini anesithathu.
ULwazi Lumbe waseMbekweni , ngaseMdantsane, ophumelele inkomo kukhuphiswano lwe-I’solezwe, ekunye nosapho lwakhe apho ebenikwa inkomo yakhe